चितवनमा पहिलो पटक कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन शुरु (हेरौँ फोटो र भिडियो) – Saurahaonline.com
चितवन: चितवनसहित देशैभर आजबाट पहिलो पटक नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन शुरु भएको छ। सातै प्रदेशका ६२ अस्पताल र १ सय २० केन्द्रबाट सूचीकृत व्यक्तिलाई खोप लगाउन थालिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत खोप अभियानको उद्घाटन गरेसगैँ दशैभर खोप कार्यक्रम शुरु भएको हो । चितवनमा पनि तीन स्थान भरतपुर अस्पताल, टाँडीको रत्ननगर–बकुलहर अस्पताल र माडीको बघौडा अस्पतालमा खोप लगाईएको छ ।
चितवनमा प्रशेद सासंद विजय सुवेदी, चितवनका प्रमखु जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई, अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारी, भरतपुर अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडीकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. जगन्नाथ तिमिल्सीना, स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिपक तिवारी, चिकित्सक युवानिधि वसौलासहितको सहभागीमा खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सो अवसरमा जिल्लामा नै पहिलो पटक भरतपुर अस्पतालका मेसु डा.जगन्नाथ तिवारीले खोप लगाउदै खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
भने रत्ननगर टाँडीमा महिला स्वयंसेविका ईश्वरीदेवी बस्नेतले पहिलो डोज खोप लगाएर शुभारम्भ गरिएको थियो । यस्तै माडीमा नगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक शिव सुवेदीले पहिलो डोज लगाएर शुभारम्भ गरिएको थियो ।
जिल्लामा ४ हजार २ सय जनालाई पुग्ने खोप आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा भरतपुर महानगरपालिका र ईच्छाकामना गाउँपालिकालाई समेटेर खोप दिईने छ । यस्तै रत्ननगर अस्पतालमा पूर्वी चितवनका रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकालाई समेटेर खोप दिईने छ । माडीमा माडी नगरपालिभित्रकालाई दिईने कार्यक्रम रहेको तिवारीले बताए।
आगामी नौ दिनभित्रमा पहिलो चरणको खोप लगाईसक्ने उनले जानकारी गराए ।
तीन वटै अस्पतालमा खोप लगाइसकेपछि हुन सक्ने सम्भावित अनपेक्षित घटना व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको छ । भरतपुर अस्पतालका डा। युवानिधि बसौलाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । यस्तै रत्ननगर अस्पतालमा डा. रामचन्द्र श्रेष्ठ तथा माडीमा डा.रन्जु सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
जिल्लामा पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, शव व्यवस्थापक गर्ने टोली, महिला स्वयम्सेविका, फोहोर व्यवस्थापक, एम्बुलेन्स चालकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपकबाबु तिवारीले जानकारी दिए । तिवारीका अनुसार दोस्रो चरणमा आएको खोप मात्रै सर्वसाधारणमाझ पुर्‍याइनेछ । भरतपुर अस्पताल, रत्ननगरको बकुल्लहर अस्पताल र माडीको बघौडा अस्पतालबाट जिल्लाभर कुल ६ हजार २ सय जनालाई खोप दिने तयारी चितवनको रहेको छ ।
भतरपुरमा मात्रै संघीय मातहतको भरतपुर अस्पतालको केन्द्रबाट ४ हजार ५ सय जनालाई खोप लगाउने तयारी छ । जिल्लामा अहिले ४ हजार २ सय डोज खोप आएको र छ प्रतिशत खेर जाने अनुमान गरिएको उनले बताए।
स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, सरसफाईकर्मी, शव व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी,एम्वुलेन्सकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।